Ukubaluleka kwamafu ekushintsheni kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ucwaningo lwakamuva olwenziwe ngochwepheshe abafunda ngamanothi okushintsha kwesimo sezulu indima ebaluleke kakhulu edlalwa amafu kule nqubo futhi lokho kuthinta kabi iplanethi yonke.
Namuhla amafu asebenza njengongqimba olukhulu emoyeni lokho gcina ingxenye yokushisa kwelanga kubangele ukwanda okukhulu kwamazinga okushisa, okuyi kuthinta kabi ekusebenzeni kahle kweplanethi.
Ngaphambi kwalesi sifundo esithakazelisayo, bekucatshangwa ukuthi ukunyuka kwezinga lokushisa okubangelwa ukuminyana okuphezulu kwesikhutha emkhathini kungaba phakathi kwama-degree amabili kuya kwamane. Manje njengoba kwaziwa ukubaluleka kwamafu kuyo yonke inqubo yokuguquka kwesimo sezulu kwaziwa, izinga lokushisa lingakhuphukela kuma-degree ama-5. Umehluko obaluleke kakhulu wokushisa nalokho kungadala izinkinga ezinkulu emhlabeni wonke esikhathini esimaphakathi nesikhathi eside.
Ngokusho kochwepheshe, leli qiniso lingaba nemiphumela emibi emhlabeni kusukela lapho ulwandle lungakhuphuka ngokungalingani noma ukuthi izikhukhula zakhiqizwa ngendlela ejwayelekile ezindaweni eziningi zomhlaba. Indima ebalulekile yamafu ekuguqukeni kwesimo sezulu akuyona into entsha esivele ikhona yayikade idlalwe ngo-2012 yiqembu lochwepheshe besimo sezulu.
Ngo-2014, kwaqinisekiswa nokuthi amazinga okushisa aphakathi komhlaba wonke ingakhuphukela cishe kuma-degree ama-5 ngenxa yesenzo samafu uqobo. Yingakho kusuka manje kuzofanele sikwenze bheka okuningi esibhakabhakeni futhi ucabangele amafu okumisa ukuguquka kwesimo sezulu nokushisa komhlaba. Isimo esimangazayo nesikhathazayo okumele yenze wonke umphakathi womhlaba ucabange ngokujulile ngaphambi kokuba kwephuze kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukubaluleka kwamafu ekushintsheni kwesimo sezulu